UDavide NoGoliyati | Izifundo ZeBhayibhile Zabantwana
UYehova wathi kuSamuweli: ‘Yiya endlini kaYese. Omnye woonyana bakhe uza kuba ngukumkani wakwaSirayeli olandelayo.’ Ngoko uSamuweli waya emzini kaYese. Akubona unyana omdala, wacinga oku: ‘Nanku umntu ofanele ukuba ngukumkani.’ Kodwa uYehova wathi kuSamuweli, ayinguye lo. UYehova wathi: ‘Mna andijongi imbonakalo yangaphandle, kodwa ndibona oko kusentliziyweni.’
UYese weza nabanye oonyana bakhe abathandathu kuSamuweli. USamuweli wathi: ‘UYehova akakhethanga namnye kubo. Unabo abanye oonyana?’ UYese wathi: ‘Ndinaye omnye ongoyena mncinane, uDavide. Usayokwalusa iigusha zam.’ Xa efika uDavide, uYehova wathi kuSamuweli: ‘Nguye kanye lo!’ USamuweli wamgalela ioli entloko uDavide, emthambisela ukuba ngukumkani olandelayo wakwaSirayeli.
Emva koko, amaSirayeli alwa namaFilisti, awayenejoni elaliyingxilimbela uGoliyati. Umhla nezolo, uGoliyati wayewagculela amaSirayeli. Wayedla ngokukhwaza athi: ‘Yizani nendoda endiza kulwa nayo. Ukuba indoyisile, siza kuba ngamakhoboka enu. Kodwa ukuba ndiyoyisile, niza kuba ngamakhoboka kuthi.’
UDavide weza nokutya kubantakwabo ababengamajoni. Wayiva le nto yayithethwa nguGoliyati waza wathi: ‘Ndiza kulwa naye!’ UKumkani uSawule wathi: ‘Kodwa useyinkwenkwana nje.’ UDavide wathi: ‘UYehova uza kundinceda.’
USawule waqala wamnika isikrweqe sakhe, kodwa uDavide wathi: ‘Andikwazi kulwa ngale nto.’ UDavide wathatha isilingi sakhe waza waya emlanjeni. Wachola amatye amahle amahlanu waza wawafaka engxoweni. Emva koko wasondela kuGoliyati ebaleka. UGoliyati wakhwaza wathi: ‘Yiza apha kwedini. Ndiza kukutyisa ngeentaka nezilwanyana zasendle.’ UDavide wayengoyiki. Waphendula wathi: ‘Uza kum uphethe umkhonto nentshuntshe, kodwa mna ndiza egameni likaYehova. Awulwi nathi kodwa ulwa noThixo. Wonke umntu olapha uza kubona ukuba uYehova ngoyena unamandla ukodlula umkhonto nentshuntshe. Uza kuninikela esandleni sethu.’
UDavide wafaka ilitye kwisilingi sakhe wasijiwuzisa. Ngoncedo lukaYehova, ilitye laya kumbetha ebunzi uGoliyati. Wawa, yaba kukufa kwakhe oko. AmaFilisti abaleka. NjengoDavide, ngaba nawe uyamthemba uYehova?
“Kubantu akunakwenzeka, kodwa akunjalo kuThixo, kuba zonke izinto zinokwenzeka kuThixo.”—Marko 10:27
Imibuzo: Ngubani owakhethwa nguYehova ukuba abe ngukumkani olandelayo wakwaSirayeli? UDavide wamoyisa njani uGoliyati?
Funda eli bali leBhayibhile limnandi ukuze uve ukuba yintoni eyanceda uDavide angoyiki.
UDavide Uba Nesibindi
Yintoni eyayibangela ukuba uDavide abe nethemba lokuba uza kumoyisa uGoliyati? Kutheni unokuba nesibindi sokuba unokwenza izinto ezifanelekileyo?
Funda ingoma ethetha ngokuba nesibindi uze uyicule nentsapho yakowenu.
Nceda umntwana wakho afunde ngentsingiselo yegama likaThixo.
Ngezixhobo Ezimbalwa, UDavide Unesibindi
Dibanisa abantu abaseBhayibhileni nemifanekiso ehambelana nabo.